မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်းမှ မျက်ရည်ပူကျခြင်း အကြောင်းရင်း - For her Myanmar
မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်းမှ မျက်ရည်ပူကျခြင်း အကြောင်းရင်း
တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတာ ခုတော့ အဖြေတွေ့ပြီလေ…
မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာ မျက်လုံးအစိုဓာတ် ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ကာကွယ်မှုပေးတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာပေးနိုင်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ၊ ပိုးမွှားတွေ ဝင်ရောက်လာရင် အပြင်ကို ပြန်ထုတ်တဲ့ စနစ်တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် မျက်ရည်အကျများတာဟာ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ခဏတာအတွင်းမှာပဲ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ သာမန်အခြေနေမှာ မျက်လုံး အရမ်းခြောက်သွေ့မနေအောင်နဲ့ အရမ်းစိုစွတ်မနေစေဖို့ မျက်ရည်ဂလင်းနဲ့ မျက်ရည်ပြွန်တို့က ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်းပေးထားပေးပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ မျက်ရည်စစ်ထုတ်တာ မလုံလောက်တော့တဲ့အခါမျိုးမှာ မျက်ရည်အလွန်အကျွံကျတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်း မျက်ရည်ကျခြင်းက တွေ့ရခဲတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ရောဂါနဲ့ အခြေအနေတွေဟာ မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပေမဲ့ တစ်ခါတလေမှာတော့ ရှားရှားပါးပါး နှစ်ဘက်လုံး တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်ပေါ်တာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်း မျက်ရည်ကျခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့-
၁။ ပြင်ပမှ အရာများ မျက်လုံးထဲ ဝင်ခြင်း
ဒါဟာ မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်း မျက်ရည်ကျခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းအရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပကနေ ဖုံမှုန့်တွေ၊ အမှုန်တွေ မျက်လုံးထဲကို ဝင်ပြီး မျက်ခွံကြားထဲ ညှပ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဖြစ်ပွားပါတယ်။
၂။ မျက်ကြည်လွှာ ဒဏ်ရာရခြင်း
မျက်လုံး အရှေ့ဘက်ကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ကြည်လင်တဲ့ အလွှာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကွဲစလေးတွေ ဝင်ရင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခါတလေမှာ တုံးတဲ့ အရာဝတ္ထုနဲ့ ထိခိုက်မိရင်ဖြစ်စေ ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါတယ်။
၃။ မျက်ကြည်လွှာ အနာဖြစ်ခြင်း
ဓာတုပစ္စည်းတွေဝင်ပြီး ထိခိုက်မိတာ၊ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ ဝင်တာတွေကြောင့် မျက်ကြည်လွှာအနာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ယောင်းရဲ့ တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားမှုတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘယ်လောက် ညီညွတ်လဲ?
၄။ မျက်လုံးထဲ ပိုးဝင်ခြင်း
ဘက်တီးရီးယားပိုး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ မှိုတွေ ကူးစက်ခံရတာကြောင့် မျက်စိအတွင်းသားရောင်ခြင်း(Conjuntivitis)၊ မျက်ကြည်လွှာရောင်ခြင်း(Keratitis)၊ မျက်ခွံရောင်ခြင်း(Blepharitis) စတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ မျက်ကပ်မှန် တပ်ရခြင်း
မျက်လုံးနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ မျက်ကပ်မှန်တွေကြောင့် မျက်လုံးနီမြန်းရောင်ရမ်းပြီး မျက်ရည်ပူကျတာတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
၆။ မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်ခြင်း (Dacryocystitis)
မျက်ရည်ပြွန်ပိတ်တယ်ဆိုတာ ပိုလျှံနေတဲ့ မျက်ရည်တွေကို နှာခေါင်းထဲကို စစ်ထုတ်တဲ့ ပြွန်ပိတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်ပေမဲ့ ကလေးတွေမှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းမှုကြောင့်တွေ့ရနိုင်သလို သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာလည်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
၇။ မျက်စိစွန်ခြင်း (Stye)
မျက်ခွံအစွန်က ပြည်ရှိတဲ့ အလုံးကလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးဝင်တာ၊ သန့်ရှင်းမှု မရှိတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
၈။ မျက်နှာတစ်ခြမ်းလေဖြတ်ခြင်း(Facial Palsy or Bell’s Palsy)
မျက်နှာ အာရုံကြော လုပ်ဆောင်ချက်ချို့ယွင်းတာကြောင့် ယာယီဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ မျက်နှာတစ်ခြမ်းလေဖြတ်တာမျိုးမှာလည်း မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်း မျက်ရည်ကျတာမျိုး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> အားဆေးတွေ မှားယွင်းစွာ သောက်မိနေပြီလား?
ကုသမှုကတော့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်ပြီး ကုသရပါတယ်။
မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်း မျက်ရည်ကျနေတဲ့အခါ ပြုလုပ်သင့်တာတွေကတော့
ရေအေးအေးနဲ့ ဆေးကြောပေးပါ။ ရေနွေးနဲ့ ရေခဲရေကိုတော့ မသုံးသင့်ပါဘူး။
မျက်လုံးကို အနားပေးပါ။ မျက်လုံးပွတ်သပ်တာမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ရေခဲအိတ်ကပ်ပေးလို့ ရပေမဲ့ မျက်ခွံပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်မကပ်သင့်ပါဘူး။ ပုဝါခံပြီးမှ ကပ်သင့်ပါတယ်။
ဆရာဝန် မညွှန်ဘဲ မျက်စဉ်းဆေး မသုံးသင့်ပါဘူး။
သန့်ရှင်းတဲ့ပဝါ၊ တစ်ရှူးစက္ကူစတာတွေနဲ့ မျက်ရည်ကျလာရင် သုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကုသမှု မခံယူခင်အချိန်မှာ နေကာမျက်မှန် ဒါမှမဟုတ် ပိုးသတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးအကာ သုံးပါ။ အလင်းရောင်စူးစူးကို မကြည့်ပါနဲ့။
မျက်ရည်ပူကျခြင်း ပျောက်ကင်းတဲ့အထိ မျက်ကပ်မှန် မတပ်ပါနဲ့။
Reference : healthhype.com
ဤဆောင်းပါးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker အား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Unicode ဖြင့်လည်း အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
တဈခြိနျလုံးဖွဈနတော ခုတော့ အဖွတှေပွေီ့လေ…
မကျြရညျကတြယျဆိုတာ မကျြလုံးအစိုဓာတျ ထိနျးသိမျးပေးပွီး ကာကှယျမှုပေးတဲ့ သဘာဝဖွဈစဉျတဈခု ဖွဈပါတယျ။ မကျြလုံးကို ထိခိုကျဒဏျရာပေးနိုငျတဲ့ အရာဝတ်ထုတှေ၊ ပိုးမှားတှေ ဝငျရောကျလာရငျ အပွငျကို ပွနျထုတျတဲ့ စနဈတဈမြိုးလညျး ဖွဈပါတယျ။
အမြားအားဖွငျ့ မကျြရညျအကမြားတာဟာ ပွဿနာမဟုတျပါဘူး။ ခဏတာအတှငျးမှာပဲ ပြောကျသှားတတျပါတယျ။ သာမနျအခွနေမှော မကျြလုံး အရမျးခွောကျသှမေ့နအေောငျနဲ့ အရမျးစိုစှတျမနစေဖေို့ မကျြရညျဂလငျးနဲ့ မကျြရညျပွှနျတို့က ဟနျခကျြညီညီ ထိနျးပေးထားပေးပမေဲ့ တဈခါတဈရံ မကျြရညျစဈထုတျတာ မလုံလောကျတော့တဲ့အခါမြိုးမှာ မကျြရညျအလှနျအကြှံကတြာမြိုး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
မကျြလုံးတဈဘကျတညျး မကျြရညျကခြွငျးက တှရေ့ခဲတဲ့ လက်ခဏာတော့ မဟုတျပါဘူး။ တခြို့ရောဂါနဲ့ အခွအေနတှေဟော မကျြလုံးတဈဘကျတညျးမှာ ဖွဈပျေါတတျပမေဲ့ တဈခါတလမှောတော့ ရှားရှားပါးပါး နှဈဘကျလုံး တဈပွိုငျနကျတညျး ဖွဈပျေါတာမြိုးလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။
မကျြလုံးတဈဘကျတညျး မကျြရညျကခြွငျးကို ဖွဈစတေတျတဲ့ အကွောငျးအရငျးတှကေတော့-
၁။ ပွငျပမှ အရာမြား မကျြလုံးထဲ ဝငျခွငျး
ဒါဟာ မကျြလုံးတဈဘကျတညျး မကျြရညျကခြွငျးရဲ့ အဖွဈအမြားဆုံး အကွောငျးအရငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ပွငျပကနေ ဖုံမှုနျ့တှေ၊ အမှုနျတှေ မကျြလုံးထဲကို ဝငျပွီး မကျြခှံကွားထဲ ညှပျနတေဲ့အခါမြိုးတှမှော ဖွဈပှားပါတယျ။
၂။ မကျြကွညျလှာ ဒဏျရာရခွငျး
မကျြလုံး အရှဘေ့ကျကို ကာကှယျပေးထားတဲ့ ကွညျလငျတဲ့ အလှာလေး ဖွဈပါတယျ။ မှနျကှဲစလေးတှေ ဝငျရငျဖွဈစေ၊ တဈခါတလမှော တုံးတဲ့ အရာဝတ်ထုနဲ့ ထိခိုကျမိရငျဖွဈစေ ဒဏျရာရရှိနိုငျပါတယျ။
၃။ မကျြကွညျလှာ အနာဖွဈခွငျး
ဓာတုပစ်စညျးတှဝေငျပွီး ထိခိုကျမိတာ၊ ဘကျတီးရီးယားနဲ့ ဗိုငျးရပျဈပိုးတှေ ဝငျတာတှကွေောငျ့ မကျြကွညျလှာအနာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ယောငျးရဲ့ တဈနတေ့ာ လှုပျရှားမှုတှကေ ကနျြးမာရေးနဲ့ ဘယျလောကျ ညီညှတျလဲ?
၄။ မကျြလုံးထဲ ပိုးဝငျခွငျး
ဘကျတီးရီးယားပိုး၊ ဗိုငျးရပျဈပိုးနဲ့ မှိုတှေ ကူးစကျခံရတာကွောငျ့ မကျြစိအတှငျးသားရောငျခွငျး(Conjuntivitis)၊ မကျြကွညျလှာရောငျခွငျး(Keratitis)၊ မကျြခှံရောငျခွငျး(Blepharitis) စတာတှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
၅။ မကျြကပျမှနျ တပျရခွငျး
မကျြလုံးနဲ့ အဆငျမပွတေဲ့ မကျြကပျမှနျတှကွေောငျ့ မကျြလုံးနီမွနျးရောငျရမျးပွီး မကျြရညျပူကတြာတှေ ဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။
၆။ မကျြရညျပွှနျပိတျခွငျး (Dacryocystitis)
မကျြရညျပွှနျပိတျတယျဆိုတာ ပိုလြှံနတေဲ့ မကျြရညျတှကေို နှာခေါငျးထဲကို စဈထုတျတဲ့ ပွှနျပိတျတာ ဖွဈပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးကွောငျ့ ဖွဈပမေဲ့ ကလေးတှမှော မှေးရာပါခြို့ယှငျးမှုကွောငျ့တှရေ့နိုငျသလို သကျကွီးရှယျအိုတှမှောလညျး အသကျအရှယျကွီးရငျ့လာတာကွောငျ့လညျး ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။
၇။ မကျြစိစှနျခွငျး (Stye)
မကျြခှံအစှနျက ပွညျရှိတဲ့ အလုံးကလေး ဖွဈပါတယျ။ ပိုးဝငျတာ၊ သနျ့ရှငျးမှု မရှိတာတှကွေောငျ့ ဖွဈပှားတတျပါတယျ။
၈။ မကျြနှာတဈခွမျးလဖွေတျခွငျး(Facial Palsy or Bell’s Palsy)
မကျြနှာ အာရုံကွော လုပျဆောငျခကျြခြို့ယှငျးတာကွောငျ့ ယာယီဖွဈပျေါတတျတဲ့ မကျြနှာတဈခွမျးလဖွေတျတာမြိုးမှာလညျး မကျြလုံးတဈဘကျတညျး မကျြရညျကတြာမြိုး ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> အားဆေးတှေ မှားယှငျးစှာ သောကျမိနပွေီလား?
ကုသမှုကတော့ စမျးသပျစဈဆေးပွီးမှ ဖွဈရခွငျးအကွောငျးအရငျးပျေါမူတညျပွီး ကုသရပါတယျ။
မကျြလုံးတဈဘကျတညျး မကျြရညျကနြတေဲ့အခါ ပွုလုပျသငျ့တာတှကေတော့
ရအေေးအေးနဲ့ ဆေးကွောပေးပါ။ ရနှေေးနဲ့ ရခေဲရကေိုတော့ မသုံးသငျ့ပါဘူး။
မကျြလုံးကို အနားပေးပါ။ မကျြလုံးပှတျသပျတာမြိုး ရှောငျကွဉျပါ။
ရခေဲအိတျကပျပေးလို့ ရပမေဲ့ မကျြခှံပျေါမှာ တိုကျရိုကျမကပျသငျ့ပါဘူး။ ပုဝါခံပွီးမှ ကပျသငျ့ပါတယျ။
ဆရာဝနျ မညှနျဘဲ မကျြစဉျးဆေး မသုံးသငျ့ပါဘူး။
သနျ့ရှငျးတဲ့ပဝါ၊ တဈရှူးစက်ကူစတာတှနေဲ့ မကျြရညျကလြာရငျ သုတျပေးနိုငျပါတယျ။
ကုသမှု မခံယူခငျအခြိနျမှာ နကောမကျြမှနျ ဒါမှမဟုတျ ပိုးသတျထားတဲ့ မကျြလုံးအကာ သုံးပါ။
မကျြရညျပူကခြွငျး ပြောကျကငျးတဲ့အထိ မကျြကပျမှနျ မတပျပါနဲ့။
ဤဆောငျးပါးအတှကျ ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker အား အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
Tags: Bacteria, eye, Health, Reason, Tears, virus, why
သူကလမ်းမခွဲချင်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ပြတ်သားနေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မုန့်ဟင်းခါး Operation ( အပိုင်း-၄ )
For Her Myanmar November 9, 2018
Hnin Ei Oo June 2, 2019